Dooro akoonka ganacsi FX kaas oo ku habboon baahiyahaaga ganacsi. Xirmooyinka la socda akoonadayada ayaa ah kuwa ku haboon macamiishadaya, portfolio kala duwan iyo heerarka maalgashiga. Ka hubi xirmooyinkaga xaga hoose oo go’aanso xidhmada kugu haboon ee kor u qaadaysa trade-kaaga. La ganacso dilaal dhiirigaliye ah, oo ka faa’id adeegyadeena sare iyo abaalmarinada maanta.
La tashi hal hal qof
Gunno Ganacsi 100%
Tababarka Agabka Ganacsi iyo MT4 oo 60 Daqiiqo ah
Isbedelada Tooska ee Suuqa oo Wicitaan Taleefan leh
30 Daqiiqo oo La Tashi Khabiir dhanka Suuqa ah
Helitaanka Shakhsiyeed ee Khabiirada Suuqa 24/5
Siganliska Ganacsiga ee VIP*
* Waa la hakin doona VIP iyo Fariimaha SMS hadii aadan samayn dhaqdhaqaaq ganacsi 30 cisho iyo ka badan.
Fulin degdegsiimo leh
nooc kasta oo akoonku yahay
kala duwan oo ganacsi oo horumarsan
ganacsi ee amaanka ah
Shakhsiyeed, Caawimaada Shaqaalaha
Luuqadaha kala duwan ku hadla 24/5
casharada oo bilaash ah
Caymiska Khasaaraha Caalamiga
ah oo gaadhaya ilaa 2.5 milyan oo lacagta euro ah